PressReader - The Manica Post: 2017-07-28 - Aspir­ing MP threat­ens fam­ily with death
Aspir­ing MP threat­ens fam­ily with death
The Manica Post - 2017-07-28 - Front Page - Love­more Kadzura Rusape Cor­re­spon­dent
AN aspir­ing MDC-T leg­is­la­tor for Makoni South al­legedly threat­ened to kill a ZANU-PF Makoni South as­sis­tant co-or­di­na­tor and his fam­ily once he is voted into Par­lia­ment next year. Chamunorwa Muzvidzwa (37) of Num­ber NC53, Nyazura Town­ship, ap­peared in court last week for vi­o­lat­ing Sec­tion 186 of the Crim­i­nal Law (Cod­i­fi­ca­tion and Re­form) Act, Chap­ter 9.23 which makes it crim­i­nal for one to make threats to com­mit mur­der. Muzvidzwa pleaded not guilty when he ap­peared be­fore Rusape pro­vin­cial mag­is­trate, Mr Shane Kubon­era, telling that court that he never threat­ened to kill Ken­neth Cha­para­p­ata who is his rel­a­tive through mar­riage.
AN ASPIR­ING MDC-T leg­is­la­tor for Makoni South al­legedly threat­ened to kill a Zanu-PF Makoni South as­sis­tant co- or­di­na­tor and his fam­ily once he is voted into Par­lia­ment next year.
Chamunorwa Muzvidzwa ( 37) of Num­ber NC53, Nyazura Town­ship, ap­peared in court last week for vi­o­lat­ing Sec­tion 186 of the Crim­i­nal Law (Cod­i­fi­ca­tion and Re­form) Act, Chap­ter 9.23 which makes it crim­i­nal for one to make threats to com­mit mur­der.
Muzvidzwa pleaded not guilty when he ap­peared be­fore Rusape pro­vin­cial mag­is­trate, Mr Shane Kubon­era, telling that court that he never threat­ened to kill Ken­neth Cha­para­p­ata who is his rel­a­tive through mar­riage.
State prose­cu­tor, Mr Ta­fara Chawatama, told the court that Muzvidzwa who runs Pachamu Bot­tle Store was heard say­ing once he get elected, he would kill Cha­para­p­ata and his fam­ily.
“On May 28 at around 11am, and at Ruk­weza Busi­ness Cen­tre, be­hind Hands Bot­tle Store, Chamunorwa Muzvidzwa, was heard by Mazvita Mu­tizwa say­ing: “If I win the on­com­ing elec­tions as MDC-T Mem­ber of Par­lia­ment, I am go­ing to kill Ken­neth Cha­para­p­ata, his wife and chil­dren.
“Mu­tizwa rushed to Cha­para­p­ata’s work­place at Pride Butch­ery in Nyazura and in­formed him about the threats.
Chara­parata made a po­lice re­port at Nyazura Po­lice Sta­tion lead­ing to Muzvidzwa’s ar­rest,” said Mr Chawatama.
Mr Kubon­era ad­journed the mat­ter to Au­gust 1 for con­tin­u­a­tion of trial.